Ngaba ishishini lakho liyazazi ezi Metri zine ziphambili? | Martech Zone
Ngaba ishishini lakho liyazi ngezi Metri zine ziphambili?
NgoLwesine, Meyi 24, 2007 NgoMgqibelo, Agasti 4, 2007 Douglas Karr
Ndadibana nenkokeli yasekuhlaleni emangalisayo kungekudala kakhulu. Uthando awayenalo ngomzi mveliso wakhe kunye nethuba elalifunekayo lalosulela. Sithethile ngemiceli mngeni kwishishini leenkonzo apho inkampani yakhe yenza uphawu lwayo.
Lushishino olunzima. Uhlahlo-lwabiwo mali luqinile kwaye umsebenzi ngamanye amaxesha unokuziva ungenakoyiswa. Njengoko sasixoxa ngemiceli mngeni kunye nezisombululo, ndaziva ngathi yehla kwiindlela ezine eziphambili.
Kuxhomekeke kwishishini lakho, iimetrikhi ezinxulumene nezi ndlela ziya kutshintsha. Kuya kufuneka ube neemetrikhi ezinxulumene nayo nganye, nangona. Awunakho ukuphucula into ongenakukulinganisa!
Ukwaneliseka yinto ebhalisa kabini kwiinkampani zakho. Ngokuqinisekileyo sonke siyivile i-'whew 'emva kokuba umthengi engonelisekanga eyekile kuthi. Kodwa into esihlala siyityeshela yinto yokuba baxelele nakwisiqingatha sabanye abantu ngendlela abangonelisekanga ngayo. Ke… awulahlanga nje umthengi, uphulukene namathemba ongezelelweyo. Ungaze ulibale ukuba abathengi (kunye nabasebenzi) abayeka ngenxa yokuba bengonelisekanga baxelela abanye abantu!
Kuba inkampani ebasebenzelayo ayimameli, baya kuhamba baxelele wonke umntu abaziyo. Ilizwi lokuthengisa ngomlomo ayisiyonto ithethwe ngokwaneleyo, kodwa inokuba nefuthe elikhulu kwishishini-elungileyo nelibi. Izixhobo ezinjenge-Intanethi zandisa ukungoneliseki.
Qiniseka ukuba ujonga inqanaba lobushushu kubathengi bakho kwaye banelisekile (nangaphezulu). I-imeyile elula, umnxeba, uphando, njl njl. Ukuba abanalo ithuba lokukhalaza kuwe-baya kukhalaza komnye umntu!
Abathengi abonelisekileyo bachitha ngaphezulu kwaye bafumanela abathengi abaninzi.
Ukugcinwa kukukwazi kwenkampani yakho ukugcina abathengi bethenga imveliso okanye inkonzo yakho.
Kwiwebhusayithi, ukugcinwa yipesenti yeendwendwe ezizodwa ezibuyayo. Kwiphephandaba, ukugcinwa yipesenti yamakhaya evuselela umrhumo wabo. Kwimveliso, ukugcinwa yipesenti yabathengi abathenga imveliso yakho emva kwexesha lokuqala.
Ukufunyanwa sisicwangciso-qhinga sokutsala abathengi abatsha okanye amajelo amatsha okuhambisa ukuze uthengise imveliso yakho. Intengiso, ukuThengisa, ukuThumela kunye neLizwi loMlomo zonke zizicwangciso-nkqubo ekufuneka uzisebenzisile, uzilinganise, kwaye unomvuzo.
Ungalibali… ukufumana abathengi abatsha kubiza kakhulu kunokugcina abo sele benabo. Ukufumana umthengi omtsha oza kuthatha indawo yalowo ushiyileyo akukhulisi ishishini lakho! Ibuyisa kuphela kumhlathana. Ngaba uyazi ukuba kubiza malini ukufumana umthengi omtsha?
Inzuzo, ewe, yimali eshiyekileyo emva kwazo zonke iindleko zakho. Ukuba awunangeniso, awuyi kuba kwishishini ixesha elide. Umda wenzuzo kukuba mkhulu kangakanani umyinge wenzuzo… abantu abaninzi bahoya kakhulu oku kodwa maxa wambi baye kwisiphene. UWal-mart, umzekelo, unenzuzo ephantsi kakhulu kodwa yenye yeenkampani ezinenzuzo kakhulu (ngobukhulu) elizweni.
Ngaphandle kwazo zonke ezi zinto, kunjalo, nguRhulumente.
Kwinqanaba leGeek, Vavanya oku!
I-Hitch kunye neNtengiso
Meyi 24, 2007 kwi-9: 08 PM
Isithuba esimangalisayo! Ndiwuthandile umbono wakho, ngakumbi kwinkonzo yabathengi. Enkosi.
Meyi 25, 2007 kwi-2: 05 PM
Ekuphela kwento eyahlula ivenkile, ivenkile, inkampani okanye umbutho esitratweni yinkonzo yethu. Ngelishwa, uninzi lweenkampani ezininzi zisilela kakhulu ekufikeleleni kwizinto ezilindelweyo, singasathethi ke ngokugqitha. Isithuba esihle kwaye kufuneka sibe sisikhumbuzo esiqhubekayo kuyo nayiphi na inkampani enenkathalo ngenkonzo.
Meyi 25, 2007 kwi-5: 12 PM
Iposti emnandi ibizama ukuyigcina ibemnandi…kodwa izakuphawula…!! Uqwalaselo olukhulu !
Meyi 28, 2007 kwi-11: 44 AM
INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA! Ndiyayithanda isicatshulwa sikarhulumente ekupheleni kwesi sithuba! Kuyinyani. Akukhathaliseki nokuba leliphi iqela eliqhuba lo mboniso, abantu abanelisekanga yiCongress, abanelisekanga nguMongameli, kwaye abaninzi noorhulumente basekhaya kunye noorhulumente basekhaya.
Kwaye uyazi ntoni??? Urhulumente ukhathalele kuphela iinyanga ezi-6 kwisithuba sommeli ngamnye – Ngexesha lonyulo kwakhona!